Blog – Page2– bokashimyanmar.com
Read More “Bokashi Myanmar — the film!”
by Bokashi Myanmar May 22, 2018 June 15, 2018 Leaveacomment
We were caught inaflash flood one day and were surprised by all the palm leaves and other branches and leaves that suddenly filled the streets. The little orange waste container didn’t standachance!
Municipal workers were surprisingly quick on the scene and kept the traffic flowing.
But I’m assuming all that ”green waste” went to landfill not compost. Pity.
တရက်သား ကျမတို့အဖွဲ့. မိုးရွာပြီး လမ်းတွေ ရုတ်တရက် ရေလျှံတာနဲ့ ကြုံရတယ်။ ရန်ကုန်မှာပေါ့။ လမ်းမပေါ် ထန်းလက်ခြောက်တွေ၊ တခြားအကိုင်းအခပ် အရွက်ပေါင်းစုံနဲ့ ရှုပ်ပွသွားလို့ အံ့ဩမိရသေး။
လိမ္မော်ရောင် အမှိုက်ပုံးလေးလဲ အခွင့်မသာလိုက်။ မြူနီစီပယ် လုပ်သားတွေ အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်မြန်မြတ်ရောက်လာပြီး လမ်းရှင်းပေးကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒိ စိမ်းစိမ်းလန်းလန်းပစ္စည်းတွေအကုန် အမှိုက်ထဲပဲရောက်ကြမှာ။ ရွက်ဆွေးမြေဩဇာလုပ်ကြမှာ မဟုတ်လောက်ဘူးလို့ ကျမတော့ထင်မိ။
#bokashimyanmar #landfill #yangon #compost
organic wastebokashi myanmar, compost, landfill, Yangon
by Bokashi Myanmar May 21, 2018 Leaveacomment
Read More “How EM works”
EM and bokashi infobokashi, bokashi myanmar, effective microorganisms, EM, microbes, microbiome, soil carbon
Read More “What is EM?”
by Bokashi Myanmar May 20, 2018 June 15, 2018 Leaveacomment
Carbon farming = getting organic matter into the soil instead of letting it become greenhouse gas.
Bokashi ticks the box, we just need to make it happen all over.
This isagreat little film, worth watching!
#bokashimyanmar #bokashi #carbonfarming #makesoil #organicwaste
Soilbokashi, bokashi myanmar, carbon farming, make soil, organic waste, soil organic carbon
THIS is why it’s so important to get organic material back into the soil where it belongs.
And THIS is why we’re starting Bokashi Myanmar.
Because it’s one of the most important things we have to do at the moment, here on our home planet.
ဩဂဲနစ်ပစ္စည်းတွေကို သူပိုင်ဆိုင်ရာအမိမြေကြီးဆီ ပြန်ပို့ဖို့ ဘာကြောင့်အရေးပါတာလဲဆိုတဲ့အဖြေက…ဒါပါပဲ။
မြန်မာပြည်မှာ ဘိုကာရှီပရောဂျတ်စတင်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကလည်း ဒါကြောင့်ပါပဲ။
ကျနော်တို့နေထိုင်ရာအိမ်သဖွယ်ဖြစ်တဲ့ ဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လတ်တလောအရေးကြီးဆုံးတွေထဲကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
#bokashimyanmar #makesoil #compost #bokashi #foodwaste
Soilbokashi myanmar, compost, food waste, make soil, soil organic carbon
At the end of the day it all ends up inapile,asack,abasket and gets transported away to landfill.
I have to say the streets are impressively clean in the downtown area; the official and unofficial waste collectors doagood job.
But the sad thing is that so little gets recycled. And all the organic stuff is mixed with the non-organic stuff like plastic. Suchawaste. We could make bokashi from it!
တနေ့တာအကုန်မှာတော့၊ အမှိုက်တစ်ထပ်ကြီးအဖြစ်လမ်းဆုံးရ။ တစ်အိတ်၊ တစ်ပုံးစသည်အားဖြင့် စုပြီး အမှိုက်ပုံတဲ့နေရာဆီ သယ်ဆောင်သွားကြ။
အစိုးရဝန်ထမ်းရော၊ အစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်တဲ့သူပါ အမှိုက်သိမ်းသူအားလုံးက အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ကြတာမို့ ရန်ကုန်ဟာ အထင်ကြီးစဖွယ်သန့်ပြန့်နေတာ ဝန်ခံရပါလိမ့်မယ်။
စိတ်မကောင်းစရာကတော့ အမှိုက်ထဲက မဖြစ်စလောက်လေးကိုပဲ ပြန်လည်အသုံးချ (recycle) လုပ်နေကြတာကိုပါ။
အော်ဂဲနစ်အမှိုက်အားလုံးကလည်း ပလပ်စတစ်လိုမျိုး အော်ဂဲနစ်မဟုတ်တာတွေနဲ့ ရောရောနှောနှော။ တကယ်ဆုံးရှုံးတာပဲ။ အော်ဂဲနစ်တွေနဲ့ ဘိုကာရှီ လုပ်လို့ရတယ်လေဗျာ။
#bokashimyanmar #organicwaste #landfill #makesoil
Markets, Yangonbokashi myanmar, landfill, make soil, organic waste